#AnnounceJamie - O'Hara sonyere Grosvenor Sport's Euro 2020 - cheapinternetsecuritysoftware.com
#AnnounceJamie – O’Hara sonyere Grosvenor Sport’s Euro 2020
By Mildred Coleman On June 9, 2021 No Comments
Grosvenor Sport ekwuputala ọkpụkpọ oku Euro 2020 ha, anyị karịrị ọnwa iji wee nabata Jamie O’Hara na ndị otu egwuregwu anyị. O nyela anyị echiche mbụ ya banyere England na ohere ha nwere ibute bọọlụ laa – lelee ya n’okpuru!
🗣️ “Anyị na-ekwu maka ụfọdụ ndị egwuregwu kacha mma n’ụwa! Anyị nọ ebe ahụ dịka ọkacha mmasị.”
Ambassador Onye nnọchi anya anyị ọhụrụ @ Mrjamieohara1 na-ekwu ihe niile England n’ihu # EURO2020!
– GrosvenorSport (GrosvenorSport) 9 Juun 2021
Jamie sonyere na otu ahụ dị ka onye nnọchi anya Euro 2020 iji nye nyocha, nyocha na obi abụọ adịghị ya na ụfọdụ echiche siri ike ka asọmpi a na-aga n’ihu. Onye mbụ Premier League kpakpando agaghị enye naanị ọtụtụ nghọta nke England, ọ nwekwara obi ike iji banye n’ókèala ndị iro…
Jobanye na ike Scottish ike pọdkastị, Open Goal, O’Hara ga-eburu ụmụ nwoke ahụ na EurDecision – egwuregwu amụma egwuregwu na-akwụghị ụgwọ ebe ndị ahịa Grosvenor Sport nwere ike imeri ihe ruru £ 60,000 n’oge Euro.
Jamie mekwara Glasgow ka ya na Si Ferry, Kev Kyle na Paul Slane gbanwere echiche ha na Podcast mbụ na European Championship – ọ ga-eju anyị anya na England v Scotland nọ nso nso a.
Grosvenor Sport na-akwado ya, nke a bụ naanị onye mmeghe asọmpi ị ga-achọ. Kporie…
Tags:AnnounceJamie Euro Grosvenor OHara sonyere Sports
Cherry Bombs adalah permainan slot dari Mancala Gaming yang memiliki …